Booliska Soomaaliyeed oo ku dhawaaqey in la xirayo mid kamid ah xarumaha Dowlada federaalka soomaaliya – Radio Baidoa
Booliska Soomaaliyeed oo ku dhawaaqey in la xirayo mid kamid ah xarumaha Dowlada federaalka soomaaliya
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqey in la xirayo Waaxda Faraha ee Xarunta Waaxda Hay’adda dambi baarista ee CID-DA sababo la xiriira Cudurka Coronavirus.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye guuto Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in iyada oo la raacayo awaamiirta Madaxda Dowladda Federaalka ee ku aadan ka taxadirka Caabuqa corona Beri laga bilaabo la xiray Waaxda Faraha ee CID.
“Iyadoo la raacaya awaamiirta guud DFS oo ku aadan taxadirka faafinta cudurka coronavirus, waxaa shacabka Somaliyeed ku wargelineynaa in laga bilaabo BERI taariikhduna ku beegantahay 19/03/2020 aan xirnay Waaxda Faraha ee CID oo bixisa warqada dembi la’aanta muddo 15 cisho ah ayay tiri”Taliye Zakiya.
Dowladda Soomaaliya ayaa bilaawdey siyaabo looga hortegi karo Cudurka Coronavirus tan iyo markii qof qaba Cudurkaas oo ka yimid Shiinaha lagu qabtey Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo safar deg deg ah ugu ambabaxay Itoobiya
Goobihii Waxbarshada Muqdisho oo maanta lafasaxey kadib makii Ra,iisul wasaare kheyre uu Amrey,